Arsenal Oo Shaaciyey Lambarka Uu Xidhan Doono Thomas Partey - Magyacada Ciyaartoydii Hore Usoo Xidhay Ee Uu Liiskooda Galay - Gool24.Net
Arsenal Oo Shaaciyey Lambarka Uu Xidhan Doono Thomas Partey – Magyacada Ciyaartoydii Hore Usoo Xidhay Ee Uu Liiskooda Galay
Arsenal ayaa xalay lasoo saxeexatay xiddigii ugu muhiimsanaa ee ay xagaagan samayso, waxaanay £45 milyan oo Gini oo ahayd lacagtii lagu burburin karayay qandaraaskiisa kasoo bixisay Thomas Partey oo ay kasoo xoogtay Atletico Madrid oo aan raalli ka ahayn.
Laacibkan oo Arsenal ka dabooli doona booska ku bannaanaa ee khadka dhexe ee difaaca ka horreeya, burburinta kubbadaha, isku-dhigista khataraha goolkiisa ku waajahan iyo xataa dhismaha kubadda oo marka ay suurtogashana uu dhaliyo goolka ayaa waxa uu qalinka ku duugay heshiis afar sannadood ah.
Partey oo u dhashay waddanka Ghana ayaa noqonaya saxeexii saddexaad ee Arsenal ay samayso xagaagan kaddib labada laacib ee reer Brazil ee Willian iyo Gabriel Magalhaes, waxaanu kulankiisa ugu horreeya safan doonaa marka laga soo laabto kulamada caalamiga ah oo toddobaadka dambe ay ciyaartoydu ku maqnaan doonaan.
Thomas Partey ayaa u xidhan doona Arsenal No.18 oo ah lambar taariikho kala duwan oo wanaag iyo xumaan ba ah ku leh Arsenal.
Markii ugu dambaysay waxa xidhnaa difaacii reer Spain ee Nacho Monreal oo ka tegay Arsenal xagaagii hore, waxaa se uga horreeyey Sebastien Squillaci, Mikael Silvestre, Pascal Cygan iyo Giles Grimandi. Waxa kale oo lambarkan xidhay Steve Morrow iyo David Hiller.
Afartii sannadood ee ugu dambeeyey, Thomas Partey waxa uu Atletico Madrid u xidhnaa No.5, laakiin kooxdiisii hore ee Almeria ee uu u ciyaari jiray ka hor intii aanu tegin Atletico, waxa uu haystay No.22.
Lambarka 5 ee uu Atletico u xidhan jiray Partey, waxa haysta Sokratis Papastathopoulos oo markii hore la filayay inuu Emirates ka tegi doono xagaagan, balse kusii negaaday.